Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ngaba ikhefu lesixeko lingabuyekeza ukusilela kwabahambi bezoshishino?
Uphando olubonisa ukuba isithathu salabo baceba uhambo oluya phesheya ngo-2022 bafuna ukubhukisha ikhefu lesixeko baya kwamkelwa ziibhodi zabakhenkethi, amakhonkco ehotele kunye necandelo leenqwelomoya - abakhenkethi banomdla wokwenza ixesha elilahlekileyo, kwaye abaninzi bagcine imali eyaneleyo. ukubhukisha iindlela ezimbini okanye ngaphezulu zokubaleka enyakeni.
Phantse kwisithathu seBrits abaceba iholide phesheya 2022 bafuna ukubhukisha ikhefu isixeko, ityhila uphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo 1 Novemba) yi WTM London, isiganeko ekhokelayo jikelele kushishino lokuhamba.
Ingxelo yoShishino lwe-WTM, i-poll yabathengi abayi-1,000, yafumanisa ukuba i-648 yayiceba ukuthatha iholide yaphesheya ngo-2022 - kwaye izixeko yayiyeyesibini ukhetho oludumileyo, emva kokhetho oluthandwa kakhulu elunxwemeni.
Ukufumanisa ukuba ama-30% afuna ukuthatha ikhefu edolophini kulo nyaka uzayo aza kubakhuthaza abanikazi bamahotele kunye neenqwelomoya kulo lonke elaseYurophu, abaye babethwa kakubi kukudodobala kokuhamba kweshishini kunye nemisitho phakathi kobhubhane.
I-Business Travel Association iqikelela ukuba, ngonyaka oqhelekileyo, i-£ 220 yezigidigidi yongezwa kwi-GDP yase-UK, ngenxa yeehambo zokuhamba ngezoshishino ezivela e-UK.
Umbutho uthe phantse zizigidi ezisithoba zohambo lweshishini olusuka e-UK ngo-2019, okubangele malunga nezigidi ezingama-50 zokuhlala ubusuku bonke - ngaphezulu kwesiqingatha bungaphantsi kobusuku obuthathu.
Kwakhona, abahambi bezoshishino benza i-15-20% yabathengi beenqwelo-moya kwaye, kwiindlela ezithile, banenzuzo ngokuphindwe kabini njengabakhenkethi bezolonwabo.
Nangona kunjalo, iinkampani zolawulo lokuhamba zibone ukuwa kwengeniso ngexesha lobhubhane ukuya kuthi ga kwi-90%.
NgokukaTourism Economics, inkampani ye-Oxford Economics, iindawo eziya edolophini zichatshazelwe kakubi ngubhubhane, ngokuyinxenye ngenxa yokuhla kokuhamba kweshishini kunye nemisitho.
Ngaphaya koko, ababikezeli bathi ukubuyiswa kohambo lweshishini kuya kushiyeka ngasemva kolonwabo.
Kwenye indawo, i-Financial Times inike ingxelo ngendlela iibhodi zabakhenkethi kunye neehotele zaseYurophu zityala imali eninzi kwiimarike zodidi oluphezulu ngelinge lokuyeka ukuxhomekeka kwimodeli yelanga-nelanga-nolwandle - umkhwa oya kunceda amaziko edolophu ukusuka. ukwehla kwabathengi bohambo lweshishini.
Iiholide zemveli zaselwandle ziya kuhlala zifunwa - njengoko iziphumo zifunyenwe kwingxelo ye-WTM yaseLondon - kodwa ikhefu lesixeko linika ithuba lokuba amatyathanga ehotele angene kwimfuno yasemva kobhubhani evela kubathengi ukuba bazibandakanye ekubalekeni kubunewunewu ngakumbi kwaye bachithe ukonga kwabo okwesibini okanye iholide yesithathu ngo-2022.
Kwaye umkhwa unokungqina ukuba lutshintsho oluthatha ixesha elide, njengoko uphando lwaseBloomberg lucebisa ukuba uninzi lweenkampani ezinkulu zicwangcisa ukuchitha imali encinci kuhambo lwasemva kobhubhani - izixhobo zonxibelelwano kwi-Intanethi, ukonga iindleko kunye nozinzo ekujoliswe kuko konke kuthetha ukuba iihotele kunye neenqwelomoya zinokufuneka. bathembele kubakhenkethi abambalwa kwixa elizayo kunangaphambi kwe-Covid-19.
USimon Press, uMlawuli weMboniso weWTM eLondon, uthe: “Ukuphumzwa kweendlela zokuhamba ngo-Okthobha kunikeze inkuthazo kubo bonke abakhenkethi abanokubakho kulo lonke elase-UK - kodwa, njengoko uhambo lweshishini lujongeka ukuba luhlale luthotyiwe ngo-2022, imakethi yolonwabo iya kubaluleka ukunceda. ukubuyisela ukusilela.
"Uphando lwethu olubonisa ukuba isinye kwisithathu sabo baceba uhambo lwaphesheya ngo-2022 bafuna ukubhukisha ikhefu lesixeko luya kwamkelwa ziibhodi zabakhenkethi, amakhonkco ehotele kunye necandelo leenqwelomoya - abakhenkethi banomdla wokubuyisela ixesha elilahlekileyo, kwaye abaninzi basindise ngokwaneleyo. imali yokubhukisha iindlela ezimbini okanye ngaphezulu zokubaleka enyakeni.
"Kwaye uninzi lwabo lonwabile ukuphucula ubunewunewu ngakumbi, amava angalibalekiyo-aza kubonelela ngamathuba kwabo bakwicandelo lokwamkela iindwendwe ukuba bavelise izinto ezintsha kwintengiso yabo kwaye bakhe ngokutsha ngemithombo emitsha yengeniso."